आज ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ,तोलाको कती? – Tufan Media News
आज ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ,तोलाको कती?
२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १४:४७
काठमाण्डाै – सुनको भाउ आज घटेको छ । तोलाको तीन सय रुपैयाँ घटेको सुनको भाउ आज ९३ हजार नौ सय रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
सुन हिजो तोलाको ९४ हजार दुई सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै चाँदी तोलाको पाँच रुपैयाँ बढेको छ ।हिजो तोलाको १३ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको भाउ आज १३ सय ५५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यो पनि :६० वर्षीय कृष्णबहादुर चेपाङ निषेधाज्ञाका कारण मजदुरी गर्न नपाएपछि बिहान गिट्ठा खोज्न जंगलतिर जान्छन्। बूढाबूढीको छाक गिट्ठाकै भरमा टरिरहेको छ। घरमा अन्न नहुँदा कालिका नगरपालिका–११ बन्दिपुरे टोलका चेपाङको दैनिकी गिट्ठा, भ्याकुर खोजेर बित्ने गरेको छ।‘घरमा चामल छैन, माग्न जाऊँ साहुले पत्याउँदैनन्’, उनी भन्छन्, ‘गिट्ठा, भ्याकुरले छाक टार्ने हो। यो पनि धेरै खाए जिब्रो बाक्लो हुन्छ। बाध्यताले खान परेको छ।’